IMarriott kwi-Mission eneehotele ezintsha eIndiya, eBhutan, eBangladesh, eSri Lanka, eMaldives naseNepal
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IMarriott kwi-Mission eneehotele ezintsha eIndiya, eBhutan, eBangladesh, eSri Lanka, eMaldives naseNepal
Imali engezantsi yedijithali ngo-XNUMX
IMarriott International namhlanje ibhengeze ukuba ityikitye izivumelwano zehotele ezingama-22 eMzantsi Asia - ezibandakanya iIndiya, iBhutan, iBangladeshi, iSri Lanka, iMaldives neNepal - kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo, belindele ukongeza ngaphezulu kwamagumbi angama-2,700 XNUMX kwipotfoliyo yayo ekhula ngokukhawuleza.
IMarriott International kungoku nje ikhenketho yehotele enelona gumbi likhulu kumazantsi eAsia kwaye kulindeleke ukuba iqhubeke nokukhula okuqinileyo ngokusayina okutsha.
“Kunyaka ongenakuqikelelwa, oku kutyikitywa kububungqina bokomelela kweMarriott International ekuqhubeni ukukhula okuluqilima kwindawo yokubuka iindwendwe eqhubeka ngokwanda,” utshilo URajeev Menon -UMongameli Asia Pacific (ngaphandle kwe-Greater China), Marriott International. “Luphawu lokuzithemba oluvela kubanini nakubantu abathengisa amalungelo okuthengisa abathe baba yinxalenye yohambo lwethu lokukhula. Sinombulelo ngenkxaso ethe gqolo kunye nokuthembela kumandla eempawu zethu njengokuba siqhubeka ukwamkela abahambi ababuyayo. ”
"Oku kutyikitywa kuqinisa ukuzibophelela kwethu kuMazantsi eAsia njengommandla ophakamileyo apho siqhubeka nokukhula kunye nokuzibandakanya nokwanda kwabathengi ngokwazisa ngakumbi iimveliso zeMarriott kunye namava awodwa kwiindawo ezinomdla," kugxininisile. I-Kiran Andicot-uSekela-Mongameli woPhuhliso loPhuhliso, uMazantsi e-Asia, iMarriott International. "Sijonge phambili ekuvulekeni kwezi hotele zintsha kwixesha elizayo kunye nokuphonononga amathuba ophuhliso lwexesha elizayo kulo mmandla wonke."
Umnqweno woMnini weeNdawo eziXabisekileyo
Ngaphezulu kwesithathu seeprojekthi ezisandula ukutyikitywa eMzantsi Asia kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo zibandakanya iihotele kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide kwindawo yokunethezeka, enezinto ezinje ngeJW Marriott kunye neehotele zaseW. Oku kubonisa imfuno ekhulayo yabahambi ye-bespoke kunye neenkonzo ezintle kunye neenkonzo. Abahambi banokulindela ukuqala kwamanqaku eW Whotele eJaipur nge W UJaipur in 2024. Nje ukuba ivulwe, ihotele ilindele ukuphazamisa izithethe zokunethezeka kwemveli kunye nenkonzo yayo ye-iconic, amandla asulelayo kunye namava amatsha. Isekwe kubomi obupheleleyo, iipropathi zeJW Marriott zibonelela ngendawo eyilelwe ukuvumela iindwendwe ukuba zigxile kwiimvakalelo ezipheleleyo-ezikhoyo engqondweni, ezondliweyo emzimbeni, kunye nokuvuselelwa ngokomoya. Kulindelwe ukuba kudutyulwe kwiindawo ezahlukileyo ezikumazantsi eAsia kule minyaka mihlanu izayo, abahambi banokujonga phambili IJW Marriott Ranthambore Irizothi kunye ne-Spa imi kwenye yeendawo ezigcina izilwanyana zasendle ezibalaseleyo eIndiya, iRanthambore National Park; JW Marriott Chennai ECR Irizothi kunye ne-Spa kunxweme lwaseIndiya oluhle olusemazantsi; IJW Marriott Agra Resort kunye ne-Spa kwilizwe lika TAJ MAHAL; kunye ne-JW Marriott brand eGoa naseShimla- zimbini zeendawo ezaziwa kakhulu eIndiya- kunye IJW Marriott Goa kwaye IJW Marriott Shimla Resort kunye ne-Spa.
IJW Marriott Ihotele eBhutan, eThimphu kulindeleke ukuba kuphawule i-DW ye-Marriott brand eBhutan, kulindeleke ukuba ivule ngo-2025 kwaye inikezele ngamava akhethiweyo abhiyozela umoya woxolo womhlaba.
IMaldives ilindele ihotele yayo yesibini iJW Marriott ngo-2025, xa I-JW Marriott Resort kunye ne-Spa, i-Embhoodhoo Finolhu-South Atoll ye-Male kubandakanya izindlu zokuhlala zamachibi ezingama-80 kulindeleke ukuba zivuleke. Ukutyikitywa kulandela oku kusandula ukuvulwa iRitz-Carlton Maldives, kwiiFari Islands, komeleza umkhondo kaMarriott kwindawo eyodumileyo yezolonwabo.
Khetha iiBrand Qhubeka nokuKhula kweDrive
Ezibandakanya iimveliso ezinjengeNkundla kaMarriott, iFairfield nguMarriott, Amanqaku amane nguSheraton, iiAloft Hotels kunye neeMoxy Hotels, iimveliso ezikhethiweyo zikaMarriott ziyaqhubeka nokubonelela eMzantsi Asia zimele ngaphezulu kweepesenti ezingama-40 zeeprojekthi ezingama-22 ezisandula ukutyikitywa. I-brand Moxy, eyaziwa ngamava ayo, isitayile sokudlala kunye nenqanaba elifikelelekayo kumaxabiso, kulindeleke ukuba iqale eIndiya naseNepal nge UMoxy Mumbai UAndheri West ngo-2023 kunye UMoxy Kathmandu kwi 2025
Iimarike zesekondari nezamabanga aphakamileyo zihleli zijolise kwiMarriott International eIndiya, zisebenzisa imfuno enamandla yabanini kunye nabahambi yeemveliso ezikhethiweyo. Eyilelwe umhambi wamashishini wale mihla, iNkundla kaMarriott kunye neFairfield ngohlobo lweMarriott bazibophelele kwinkonzo yeendwendwe ezikrelekrele nezicingisisayo, nokuba ithini injongo yohambo lwabo. Ngezivumelwano ezisandula ukutyikitywa, iNkundla kaMarriott ilindele ukongeza iipropathi ezintlanu kwindawo ekhoyo yokusebenza yeehotele ezingama-20 kuMazantsi eAsia. Ezine zezi propati kulindeleke ukuba zivule kule minyaka mihlanu izayo kwaye ziya kubekwa kwiimarike ezimbini eziphambili eIndiya: Inkundla kaMarriott Gorakhpur; Inkundla kaMarriott Tiruchirappalli; Inkundla kaMarriott Goa Arpora; yaye Inkundla kaMarriott Ranchi. UFairfield ulindele ukongeza iipropathi ezimbini eJaipur. ESri Lanka, i Inkundla kaMarriott Colombo kulindeleke ukuba kuphawule i-akhawunti yetyala leNkundla kwilizwe, ekucwangciselwe ukuba ivulwe ngo-2022.
I-Premium Brands Cement yabo
Ilindelwe ukuqhubela phambili nokukhula kweempawu zepremiyamu eMzantsi Asia, ukutyikitywa kutsha nje kubandakanya I-Katra Marriott Resort kunye ne-Spa eIndiya kunye ne Le Meridien Kathmandu, ekulindeleke ukuba ibe lityala leLe Meridien brand eNepal. Ukongeza, i Ihotele iBhaluka Marriott kulindeleke ukuba kuphawule ukungena kwegama iMarriott Hotels e-Bangladesh, ekulindeleke ukuba ivulwe ngo-2024.
IMarriott yaMazwe ngaMazwe ibekwe kakuhle eMzantsi Asia ineehotele ezili-135 ezisebenzayo kwii-16 zeempawu ezahlukeneyo kumazwe amahlanu, ezijolise ekunikezeleni ngamava ahlukileyo kumacandelo abahambi. Iimpawu ezikhoyo ngoku eMzantsi Asia zibandakanya: iJW Marriott, iSt. Regis, iRitz-Carlton, iihotele zaseW, kunye neQokelelo leLuxury kwicandelo lokunethezeka; Iihotele zaseMarriott, eSheraton, eWestin, kwiPotifoliyo yoThutho, eLe Meridien, eRenaissance naseMarriott Executive Apartments kwicandelo leprimiyamu; Inkundla kaMarriott, Amanqaku amane nguSheraton, eFairfield nguMarriott naseAloft Hotels, kwicandelo lenkonzo elikhethiweyo.